amụma nzuzo | Gosi Top
showtop.info is committed to ensuring that your privacy is protected. Anyị kwesịrị ịjụ gị ka ịnye ụfọdụ ozi site na nke ị nwere ike mata mgbe na-eji nke a website, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ inwe obi ike na ọ ga-na-eji dị na nkwupụta nzuzo a.
showtop.info nwere ike ịgbanwe a iwu site n'oge ruo n'oge site emelite peeji a. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from: November 2015
Anyị nwere ike ịnakọta ndị na-esonụ ọmụma:
aha na ọrụ aha
ozi omume igwe mmadụ ndị dị otú ahụ dị ka koodu nzi ozi, mmasị na ọdịmma
ozi ndị ọzọ mkpa ka ahịa n'oru nyocha na / ma ọ bụ na-enye
Ihe anyị na-eme na ọmụma ndị anyị nwetara
Anyị chọrọ ka ozi a iji aghọta gị mkpa ma nye gị na a mma ọrụ, na karịsịa maka ndị na-esonụ:
Anyị nwere ike iji ozi ahụ iji mma ngwaahịa na ọrụ anyị
Anyị nwere ike oge izipu ozi-e nkwado banyere ọhụrụ na ngwaahịa, pụrụ iche enye ma ọ bụ ozi ndị ọzọ nke anyị na-eche i nwere ike ịhụ na-akpali iji adreesị ozi-e nke i nyere.
Site n'oge ruo n'oge, Anyị nwekwara ike iji ozi gị iji kpọtụrụ gị maka nyocha ahịa nzube. Anyị nwere ike kpọtụrụ gị site email, ekwentị, fax ma ọ bụ mail. Anyị nwere ike iji ozi ahụ iji hazie website dị ka gị ọdịmma.
Anyị na-agba mbọ ka n'ịhụ na ozi gị ala. Iji gbochie n'enweghị ikike ohere ma ọ bụ ngosi, anyị etinye n'ime ebe kwesịrị ekwesị anụ ahụ, na kọmputa na nlekọta usoro iji chebe ma nọrọ ná nchebe ọmụma anyị na-anakọta online.
Gịnị bụ kuki?
Cookies bụ faịlụ ederede nwere obere ichekwa ọmụma nke na-ebudatara ngwaọrụ gị mgbe ị gara na a website. Kuki na-ahụ zitere azụ ka n'iweta website on ọ bụla ụdi nleta, ma ọ bụ ọzọ website na ghọtara na kuki. Kuki ndị bara uru n'ihi na ha na-ekwe a website na-aghọta na onye ọrụ ngwaọrụ.
Ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara kuki na:
N'ihi na a video banyere kuki nleta a lee anya na kuki
Kuki eme nza nke dị iche iche ọrụ, dị ka ime ka ị ịnyagharịa n'etiti peeji nke rụọ ọrụ nke ọma, na-echeta mmasị gị, na n'ozuzu melite ọrụ ahụmahụ. Ha nwekwara ike inye aka hụ na Mgbasaozi ị na-ahụ online ndị ọzọ mkpa ka gị na ọdịmma. Kuki-eji na a website e categorized dabeere na edemede dị na ICC UK Kuki ndu.
Udi 1: dị mkpa n'ezie kuki
Kuki ndị a dị oké mkpa iji eme ka i nwee ịkpali gburugburu website na-eji ya atụmatụ, dị ka ịnweta ala ebe nke website. Enweghị kuki ndị a ọrụ ndị i jụrụ n'ihi, dị ka nkata ịzụ ahịa ma ọ bụ e-ịgba ụgwọ, -apụghị nyere.
Udi 2: arụmọrụ kuki
Kuki ndị a na-anakọta ozi banyere otú ọbịa eji a website, ihe atụ nke peeji nke ọbịa na-aga ọtụtụ mgbe, ma ọ bụrụ na ha na-njehie ozi site na ibe weebụ. Kuki ndị a na-adịghị na-anakọta ozi na-emetụta a esenowo. All ọmụma kuki ndị a na-anakọta bụ aggregated na Ya mere amaonye. Ọ bụ naanị na-eji mma otú a website ọrụ.
Site na iji website, ị na-ekweta na anyị nwere ike ịzọ ndị a ụdị kuki na ngwaọrụ gị.
Udi 3: arụmọrụ kuki
Kuki ndị a na-ekwe ka website icheta nhọrọ ndị ị na-eme ka (dị ka aha njirimara gị, asụsụ ma ọ bụ n'ógbè ị na-na) na-enye enwekwukwa, ihe na atụmatụ. Dị ka ọmụmaatụ, a website ga-enwe ike iji nye gị Obodo ihu igwe na-akọ ma ọ bụ okporo ụzọ ozi ọma site na ịchekwa na kuki n'ógbè na nke ị na-ugbu a emi odude. Kuki ndị a nwekwara ike-eji na-echeta mgbanwe i mere ka ederede size, fonts and other parts of web pages that you can customise. Ha nwekwara ike ga-eji iji nye ọrụ ị rịọrọ maka dị ka ekiri a video ma ọ bụ na-ekwu banyere blog. The ọmụma kuki ndị a na-anakọta nwere ike zoo na ha nwere ike ghara soro gị nchọgharị ọrụ na ndị ọzọ weebụsaịtị.
Udi 4: ezubere iche kuki ma ọ bụ mgbasa ozi kuki
Kuki ndị a na-eji anapụta Mgbasaozi dịịrị gị mkpa na gị ọdịmma Ha na-eji na-amachi ọnụ ọgụgụ nke ugboro ị na-ahụ ihe advertisement nakwa dị ka enyere tụọ irè nke mgbasa ozi mkpọsa. Ha na-emekarị enịm mgbasa ozi netwọk na website ọrụ si ikike. Ha na-echeta na i gara a website na ozi a na-akọrọ ndị ọzọ na òtù dị ka akpọsa ngwá ahịa. Ezi mgbe ezubere iche ma ọ bụ mgbasa ozi kuki ga-jikọrọ saịtị arụmọrụ nyere site òtù ndị ọzọ.
Anyị website nwere ike ịnwe njikọ ndị ọzọ na weebụsaịtị nke mmasị. Otú ọ dị, ozugbo ị na-eji ndị a njikọ na-ahapụ anyị na saịtị, ị kwesịrị ị na mara na anyị adịghị ihe ọ bụla na-achịkwa na ndị ọzọ website. Ya mere, anyị na-apụghị ịbụ maka nchebe na nzuzo nke ozi ọ bụla nke ị na-enye ebe eleta ndị dị otú ahụ na saịtị na otú ahụ na saịtị na-adịghị achịkwa nkwupụta nzuzo a. Ị kwesịrị ị na-elezi anya ma na-ele ndị nkwupụta nzuzo na ọdabara ka website na ajụjụ.
Ị nwere ike ịhọrọ igbochi collection ma ọ bụ ojiji nke ozi gbasara gị na-esonụ ụzọ:
mgbe ọ bụla ị na-jụrụ jupụta na a etolite na website, anya maka igbe na ị nwere ike pịa na-egosi na ị na-achọghị ozi ahụ iji na-eji onye ọ bụla maka kpọmkwem ahịa nzube
Anyị agaghị na-ere, kesaa ma ọ bụ mgbazinye ozi nkeonwe gị na ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị nwere gị ikike ma ọ bụ na-achọrọ site na iwu ime otú. Anyị nwere ike iji ozi nkeonwe gị iji zitere gị nkwado ọmụma banyere ọzọ nke anyị na-eche na ị nwere ike na-akpali ọ bụrụ na ị na-agwa anyị na ị chọrọ a na eme.